Eye injury (မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Eye injury (မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်း)
Eye injury (မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်းဟာ မျက်လုံးထဲဆပ်ပြာဝင်သလို အသေးမွှားကနေစပြီး မျက်လုံးကန်းခြင်းလိုမျိုး အကြီးစားထိခိုက်မှုတွေအထိရှိတတ်ပါတယ်။ ထိုထိခိုက်မှုတွေဟာ အလုပ်၊ကျောင်း၊ မတော်တဆမှုတွေနဲ့ အားကစားပြုလုပ်ခြင်းတို့မှ ရရှိတတ်ပါတယ်။
Eye injury (မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မျက်လုံးထိခိုက်မှုတွေဟာ အသက်အရွယ်မရွေး တော်တော်လေးအဖြစ်များပါတယ်။ မိန်းမတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိအချက်များကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းအားဖြင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Eye injury (မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အတွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတုပစ္စည်းများနဲ့ထိတွေ့မိခြင်း။ လောင်တာနဲ့ နာတာက အတွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။ မျက်ရည်တွေဆက်တိုက်ထွက်နေမယ်၊ နီနေမယ်။ မျက်ခွံလည်း ရောင်ရမ်းနေပါလိမ့်မယ်။
မျက်သားအောက်သွေးယိုခြင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ မနာကျင်တတ်ပါဘူး။ အမြင်အာရုံလည်းမထိခိုက်ပါဘူး။ မျက်လုံးအဖြူသားပေါ်မှာ အနီစက်ကလေး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခြေအနေဟာ မျက်လုံးသွေးကြောတွေ ပေါက်ထွက်လို့ဖြစ်ရတာပါ။ မျက်လုံးနီတဲ့နေရာတွေကလည်း ကျယ်ပြန့်ပြီး စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဘာထိခိုက်မှုမှမရှိဘဲနဲ့လည်း သွေးယိုစီးနိုင်ပါတယ်။ အခြားထိခိုက်မိတဲ့ လက္ခဏာတွေမရှိဘူးဆိုရင် အန္တရယ်မရှိပါဘူး။ ၄ရက်၊၁၀ရက်အတွင်းမှာ သူ့အလိုလိုပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
မျက်ကြည်လွှာစုတ်ပြဲခြင်း။ သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ နာကျင်ခြင်း၊ မျက်လုံးထဲတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ခံစားမိခြင်း၊ စုတ်ပြဲခြင်းနှင့် အလင်းစူးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
သူငယ်အိမ်ကြွက်သားရောင်ခြင်း။ နာကျင်တာတွေ၊ အလင်းစူးတာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖို့များပါတယ်။ နာတာကတော့ မျက်လုံးနဲ့ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာ ကိုက်ပြီးနာတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားစုတ်ပြဲနေတာကို မြင်ရမှာပါ။
မျက်လုံးရိုးကျိုးခြင်း။ လက္ခဏာတွေကတော့ နာကျင်ခြင်း၊ လှုပ်ရင်ပိုနာခြင်း၊ မျက်လုံးတစ်ဖက်ပိတ်လိုက်ရင် နောက်တစ်ဖက်က နှစ်ထပ်မြင်ခြင်း၊ နှာမှုတ်ရင်ပိုးဆိုးသော မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိခိုက်မိတဲ့ဘက် အပေါ်နှုတ်ခမ်းမှာလည်း ထုံကျင်တတ်ပါတယ်။ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာ ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ အညိုအမဲစွဲခြင်းတို့လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးအညိုအမဲစွဲတယ်ဆိုတာ မျက်ခွံမှာ သွေးတွေပုံလို့ဖြစ်ရတာပါ။ လုံးဝပျောက်ကင်းဖို့ ရက်သတ္တပတ်ရဲ့ချီပြီး ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
မျက်သားစုတ်ပြဲခြင်း။ သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ နာကျင်ခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊ မျက်လုံးထဲတွင် တစ်ခုခုရှိနေသည်ဟု ခံစားရခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ကြည်လွှာနှင့်မျက်ဖြူသားစုတ်ပြဲခြင်း။ နာကျင်ခြင်းနဲ့ အမြင်မကောင်းတော့ခြင်းတို့ကို ခံစားရမှာပါ။
မျက်ကြည်လွှာသို့ဝင်ရောက်ခြင်း။ မျက်လုံးထဲတွင် တစ်ခုခုရှိနေသည်ဟုခံစားရခြင်း၊ စုတ်ပြဲခြင်း၊ အမြင်ဝါးခြင်းနဲ့ အလင်းစူးခြင်းတို့က အတွေ့များတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မျက်ကြည်လွှာမှာ ဝင်သွားတဲ့ ပစ္စည်းကိုတွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီပစ္စည်းက သတ္ထုဖြစ်မယ်ဆိုရင် သံချီးရောင်အကွင်းဒါမှမဟုတ် သံချီးရောင်စွန်းနေတာကိုမြင်ရမှာပါ။
မျက်ရိုးအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်း။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး နာရီအနည်းငယ် ဒါမှမဟုတ် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ အမြင်ဝါးခြင်း၊ နှစ်ထပ်မြင်ခြင်းနဲ့ နာကျင်ခြင်းတို့ကို ခံစားရမှာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ လက္ခဏာမပြတတ်ပါဘူး။
မျက်လုံးအတွင်းတို့ဝင်ရောက်ခြင်း။ အစပိုင်းမှာ နာကျင်ခြင်းနှင့် အမြင်မကောင်းခြင်းတို့ကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းကသေးငယ်ပြီး အရှိန်နဲ့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာလက္ခဏာမှာခံစားရနိုင်ပါဘူး။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့်မျက်ကြည်လွှာဆဲလ်ပုံပြောင်းခြင်း။ လက္ခဏာတွေက နာကျင်ခြင်း၊ အလင်းစူးခြင်း၊ နီရဲခြင်းနဲ့ မျက်လုံးထဲမှာတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ မခံမရပ်နိုင်ခံစားရခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့ပြီးပြီးချင်း လက္ခဏာမပြပါဘူး။ လေးနာရီလောက်ကြာပြီးမှသာ လက္ခဏာပြပါတယ်။
နေရောင်ကြောင့်မြင်လွှာပျက်စီးပြီး။ အဓိကလက္ခဏာကတော့ မြင်ကွင်းအလယ်မှာမှုန်ပြီး အမြင်မကောင်းတော့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခြေအနေအများစုမှာတော့ ဆက်တိုက်နာကျင်ခြင်း၊ မျက်လုံးပုံစံမမှန်ခြင်းနဲ့ သွေးထွက်ခြင်းတို့ကို ခံစားရမှာပါ။ မျက်လုံးဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့အဆင်ပြေရင် သူနဲ့ပြပြီး အဆင်မပြေရင် အရေးပေါ်ဌာမှာမှာ ပြသပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Eye injury (မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဓါတုပစ္စည်းများဖြင့်ထိတွေ့မိခြင်း။ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အဓိကကတော့ အရည်တွေမျက်လုံးထဲဝင်လို့ပါပဲ။ ဆပ်ပြာ၊ နေလောင်ခံလိမ်းဆေးနဲ့ မျက်ရည်ယိုဓါတ်ငွေ့တွေလိုမျိုူ ဓါတုပစ္စည်းများစွာကတော့ မျက်လုံးကို နေမထိထိုင်မသာဖြစ်စေရုံမျှသာ သက်ရောက်ပြီး ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း အက်စစ်တွေနဲ့ အယ်ကာလီတွေကတော့ မျက်လုံးမျက်နှာပြင်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
ကားဘက်ထရီမှာတွေ့ရတဲ့ ဆာဖျူရစ်အက်စစ်တွေနဲ့ ရေပိုက်သန့်ဆေး၊ အမိုးနီးယားတို့မှာရှိတဲ့ အယ်ကာလီတွေဟာ မျက်လုံးထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဓါတုပစ္စည်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ လက်နဲ့မျက်လုံးကိုပွတ်မိရာကနေတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဇာတိပ္ဖိုလ်ပွင့်၊ မျက်ရည်ယိုဓါတ်ငွေ့၊ ငရုတ်ကောင်းစပရေးနဲ့ ဆံပင်ဖြန်းဆေးတို့လိုမျိုးဓါတုပစ္စည်းတွေဆိုရင် လေကနေတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
မျက်လွှာအောက်သွေးယိုခြင်း။ ထိုအခြေအနေဟာ မျက်ဖြူသားအောက်မှာ သွေးတွေစုပုံနေတာကို ခေါ်တာပါ။ မျက်ဖြူသားကို ကွန်ဂျက်တိုင်ဗာလို့ခေါ်တဲ့ သွေးကြောမြှင်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး အလင်းဖောက်သာ အလွှာပါးလေးနဲ့အုပ်ထားပါတယ်။ မျက်လွှာအောက်သွေးယိုစိမ့်ခြင်းဆိုတာ မျက်လုံးထိခိုက်မှုတွေနဲ့ တွဲလာတတ်ပါတယ်။ သူ့အလိုလိုလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သွေးယိုစိမ့်မှုအနည်းအများက အခြေအနေပြင်းထန်မှုနဲ့ မဆက်နွယ်နေပါဘူး။
မျက်ကြည်လွှာစုတ်ပြဲခြင်း။ မျက်ကြည်လွှာဆိုတာ သူငယ်အိမ်နဲ့ မျက်ဝန်းအရှေ့မှာရှိတဲ့ အလင်ဖောက်တစ်ရှုးတစ်ခုပါ။ ခြစ်မိခြင်းနဲ့ ထိမိခိုက်မိခြင်းတို့ကြောင့် စုတ်ပြဲနိုင်ပါတယ်။ မျက်ကြည်လွှာစုတ်ပြဲတဲ့လူတွေမှာ အရုပ်၊ သတ္ထုပစ္စည်း၊ လက်သည်းနဲ့ သစ်ကိုင်းစတို့ထိုးမိခြင်းနှင့် မျက်ကပ်မှန်ကြာရှည်စွာ ဝတ်ထားမိခြင်းတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ထိခိုက်မှုကြောင့် သူငယ်အိမ်ကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်း။ မျက်ကြည်လွှာစုတ်ပြဲစေတဲ့ ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းတွေကြောင့်ပါပဲ။ မတူတာကတော့ လက်သီး၊ တုတ်နဲ့ ကားလေအိတ်တို့လိုမျိုး ပိုတုံးတဲ့အရာတွေကြောင့် ပိုဖြစ်ရတာပါ။ မျက်ဝန်းရဲ့ အရောင်ဟာ သူငယ်အိမ်ကြွက်သားကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ သူငယ်အိမ်ကနေတစ်ဆင့် ဖြတ်ဝင်တဲ့ အလင်းပမာဏကို ကန့်သတ်ပေးမယ့် ကြွက်သားပါရှိပါတယ်။ အိုက်ရိုက်တစ် (Iritis) ဆိုတာ သူငယ်အိမ်ကြွက်သားရောင်တာပါပဲ။
မျက်ရိုးကျိးခြင်းနှင့် ဟိုင်ဖီးမား။ ထိုအခြေအနေတွေဟာ မျက်လုံးနဲ့ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကို တုံးတဲ့အရာတွေနဲ့ ထိမိခိုက်မိလို့ဖြစ်လာရတာပါ။ ဥပမာတွေပြောရမယ်ဆိုရင် မျက်နှာကို ဘေ့စ်ဘောလ်၊ ရက်ကက်ဘောလ်၊ စကွက်ဘောလ်နှင့် ပုလင်းဖော့စို့မှန်ခြင်း၊ လက်သီးနဲ့အထိုးခံရခြင်နဲ့ အကန်ခံရခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုင်ဖီမားဆိုတာ မျက်လုံးအရှေ့ဘက်နေရာအလွတ်လေးမှာ သွေးထွက်ခြင်းကို ခေါ်တာပါ။ မျက်ကြည်လွှာနဲ့ မျက်ဝန်းအကြားမှာ တည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာလွတ်လေးကို ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Aqueous fluid လိုခေါ်တဲ့ အရည်ကြည်လေးနဲ့ ဖြည့်ထားပါတယ်။
မျက်ရိုးကျိုးတယ်ဆိုတာ မျက်လုံးပတ်ပတ်လည်ရှိ မျက်နှာအရိုးများ ကျိုးပဲ့ခြင်းကို ခေါ်တာပါ။ မျက်လုံးအောက်ခြေမှာ ကြမ်းပြင်သဖွယ်ရှိနေပြီး မျက်လုံးကို ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ အရိုးပါးပါးလေးမှာ ကျိုးတာပါ။
မျက်ခွံ ဒါမှမဟုတ် မျက်ဖြူလွှာပျက်စီးခြင်း။ ပြုတ်ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို ချွတ်ထက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်ကြည်လွှာနှင့်မျက်ဖြူလွှာပျက်စီးခြင်း။ သတ္ထုပစ္စည်းတွေ ဒါမှမဟုတ် ဖန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ချွန်ထက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိခိုက်မိခြင်းကြောင်းဖြစ်တတ်ပြီး အလွန်ဆိုးရွားတတ်ပါတယ်။
မျက်လုံးအတွင်းသို့ပြင်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်ခြင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့် သတ္ထု၊သစ်သားနဲ့ ပလတ်စတစ်စသေးသေးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ကြည်လွှာမှာဆိုရင်တော့ အဲဒီနေရာမှာပဲရှိနေပြီး သူ့ဘာသာသူတော့ ဘယ်နေရာကိုမှ ဖောက်ဝင်မသွားပါဘူး။ သတ္ထုပစ္စည်းတွေဆိုရင်တော့ သံချေးအစွန်းတွေပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကုသမှုလိုအပ်ပါတယ်။
မျက်ရိုးအတွင်းပြပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ မျိုးရိုးအခွက်ထဲမှာပဲရှိပြီး မျက်လုံးကိုဖောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မျက်လုံးအတွင်းသို့ ဝင်ရလောက်အောင် ဒဏ်ရာရမယ်ဆိုရင်လည်း အပြင်ဘက်နံရံတွင်သာဖြစ်ပြီး မျက်လုံးအတွင်းသို့ သူ့ဘာသာ ဝင်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် မျက်လုံးအပေါ်လွှာရောင်ရမ်းခြင်း။ အဖြစ်များသော အလင်းကြောင့်မျက်လုံးဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်ပြီး မျက်ကြည်လွှာနေလောင်ခြင်းလို့လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေကတော့ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ နေပူစာလှုံခြင်း၊ အဓိကအမြင့်နေရာတွေမှာ နှင်း၊ ရေနဲ့ အခြားအလင်းပြန်ပစ္စည်းတွေမှာ အလင်ပြန်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမြင့်နေရာတွေမှာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေ ပိုပြင်းထန်ပါတယ်။
နေရောင်ကြောင့်မြင်လွှာထိခိုက်ခြင်း။ နေကိုစိုက်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြင်လွှာအလယ်ဗဟိုမှာ ထိခိုက်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ နေကြတ်တာကိုကြည့်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဆေးကြောင်ပြီး နေကိုအချိန်ကြာကြာစိုက်ကြည့်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Eye injury (မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့အတူ ဆေးမှတ်တမ်းတွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ထိခိုက်အနာတရဘယ်လိုရလည်းဆိုတာက ဆရာဝန်ကို စစ်ဆေးမှုတွေမှာ ဘယ်အပိုင်းမှာ အာရုံစိုက်ရမယ်ဆိုတာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ လူနာရဲ့ အမြင်ပိုင်းကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မျက်မှန်ယူဆောင်လာသင့်ပါတယ်။ လူနာဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံးမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ကြည်လွှာကို ထိခိုက်မှုရှိမရှိအား မျက်ရည်စိုစွတ်တဲ့နေရာကို အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆိုးဆေးထည့်ခြင်းဖြင့် စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ထိုဆိုးဆေးကိုတော့ Fluorescein လို့ခေါ်ပြီး မျက်ကြည်လွှာရဲ့ ထိခိုက်မိတဲ့နေရာကို စွန်းထင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြာရောင်အလင်းနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် စုတ်ပြဲနေတဲ့ မျက်ကြည်လွှာအပိုင်းဟာ အစိမ်းရောင်တောက်လာပါလိမ့်မယ်။
များသောအားဖြင့် Slit Lamp လိုခေါ်တဲ့ ပစ္စည်းကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ထိုပစ္စည်းဟာ မျက်လုံးကို အလင်းထိုးပြီး ပုံကြီးချဲ့ပေးတဲ့ အရာပါ။ ဓါတ်မှန်ရိုက်တာကိုတော့ သုံးတာရှားပါတယ်။ မျက်ရိုးကျိုးခြင်း၊ မျက်လုံးအတွင်းပိုင်းထိခိုက်မှုနဲ့ မျက်လုံးအတွင်း ပြင်ပစ္စည်းဝင်ရောက်ခြင်းတွေဆိုရင်တော့ အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။ မျက်ကြည်လွှာသို့ ပြင်ပပစ္စည်းဝင်ရောင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဓါတ်မှန်ရိုက်ဖို့ လိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Eye injury (မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အသေးစားထိခိုက်မှုတွေကိုတော့ မိသားစုဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် အရေးပေါ်ဌာနကဆရာဝန်ဖြင့် ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းဆိုးရွားတဲ့ ထိခိုက်မှုတွေဆိုရင်တော့ မျက်စိဆရာဝန်ဖြင့် ပြသမှရပါလိမ့်မယ်။ မျက်စိဆရာဝန်တွေကို Ophthalmologist လို့ခေါ်ပါတယ်။ အချို့လူနာတွေကတော့ ပလတ်စတစ်ဆာဂျူရီ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေနဲ့ ဆေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ်။
မျက်လုံးထိခိုက်မိခြင်းကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေကဘာတွေလဲ။
မျက်လုံးထိခိုက်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ခွံမှာ ပြတ်ရာရှရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ပိုးတတ်ထားတဲ့အဝတ် ဒါမှမဟုတ် ပတ်တီးစီးပေးထားပါ။ ပိုးသတ်ထားတဲ့ပတ်တီးမရှိဘူးဆိုရင် အဝတ်သန့်သန့်လေးပတ်ပေးထားပါ။ အမွှေးဖွာတဲ့ဂွမ်းတွေ၊ အဝတ်တွေမသုံးပါနှင့်။ မျက်လုံးမှာ လာကပ်နေတတ်ပါတယ်။ ပတ်တီးကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့နေပါစေ။
မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ရောင်ရမ်းတာကို လျော့ချဖို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး ၄၈နာရီအတွင်းမှာ ရေခဲအိတ်ကို တစ်နေ့ကို ၃ခေါက် ဒါမှမဟုတ် ၄ခေါက်လောက် ၁၅မိနစ်ခန့်ကပ်ပေးပါ။ မြန်မြန်ကပ်လေ အရောင်ပိုကျလေပါပဲ။ အရောင်ကျသွားပြီဆိုရင်တော့ အနာသက်သာစေဖို့ အပူပြန်ကပ်ပေးပါ။
ဓါတုပစ္စည်းပါတဲ့ ရေခဲအိတ်တွေကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ ဓါတုပစ္စည်းတွေ ယိုစိမ့်ထွက်နေမယ်ဆိုရင် မျက်လုံးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေကိုလည်း အသုံးမပြုပါနှင့်။
အရောင်ကျစေဖို့ ခေါင်းကို မြှင့်ထားပေးပါ။ အစီတာမီနိုဖန်၊ အိုင်ဗျူပရိုဖန်နဲ့ အက်စပရင်လိုမျိုး ဆေးဆိုင်းတိုင်းမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သော အနာသက်သာစေသည့်ဆေးဝါးများ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သိချင်တာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းလမ်းတွေကို ပိုမိုနားလည်သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက်ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
https://www.webmd.com/eye-health/tc/eye-injuries-home-treatment#1. Accessed October 26, 2017.
https://www.emedicinehealth.com/eye_injuries/page4_em.htm#how_do_health-care_professionals_diagnose_eye_injuries. Accessed October 26, 2017.